PCB Assembly Samples Manufacturers - China PCB Assembly Samples Suppliers & Factory
PCBFuture na-enye ndị ahịa anyị ntụkwasị obi Turnkey PCB nzukọ ọrụ na-eweta ezigbo mma nsonaazụ na asọmpi ahịa. Ọrụ Turnkey PCB nzukọ gụnyere PCB fabricate, Components sourcing, PCB nzukọ na Ule. Dị ka a na-eduga biri ebi circuit board nzukọ ụlọ ọrụ, PCBFuture focus on surface Mount and through onu nzukọ, anyị niile na usoro na igwe ahazi izute imewe, nkọwapụta na olu nke gị ngwá electronic nzukọ ọrụ.
Iji hụ na ndị ọhụrụ electronic ngwaahịa ndị zuru okè tupu igba egbe n'ahịa, anyị ga-mkpa nwalee prototypes tupu uka mmepụta. PCB fabricates na PCB nzukọ ndị dị mkpa usoro maka prototype turnkey PCB mmepụta. The prototype PCB nzukọ na-eji maka ọtọ ule, otú ndị injinia nwere ike ezigbo imewe na idozi ụfọdụ chinchi. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịchọ oge 2-3, ma chọta onye nrụpụta mgbakọ eletrọniki a tụkwasịrị obi dị oke mkpa.
PCBFuture bụ maka dum PCB nzukọ si PCB n'ichepụta, mmiri ị nweta, SMT nzukọ, site onu nzukọ, ule na nnyefe. Dị ka a na-eduga electronic nzukọ emeputa na-enye olu PCB nzukọ ọrụ, anyị hụ na gị ngwaahịa bụ kpam kpam free na ala na-eri.
Na PCBFuture, anyị na-ewe usoro iji gosipụta na ogo ọrụ anyị dabara ma karịa atụmanya nke ndị ahịa anyị. Ndị otu anyị na-eji teknụzụ na ngwa PCB kachasị ọhụrụ eme ihe iji gboo mkpa maka mma. Anyị raara onwe anyị nye inye ngwaahịa na ọrụ dị mma enyerela anyị aka inweta ntụkwasị obi na nsọpụrụ nke ndị ahịa anyị.
Ọrụ Mgbanwe Flex PCB
PCB na-agbanwe agbanwe, nke a makwaara dị ka elektrọnik na-agbanwe agbanwe, bọọdụ sekit na-agbanwe agbanwe, Flex PCB, eriri elegharị anya, bụ ụdị nzukọ elektrọnik site na ịkwado akụrụngwa eletriki na mkpụrụ rọba rọba dịka polyimide, PEEK ma ọ bụ transperent conductive polyester film. Tụkwasị na nke ahụ, sekit ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike ịbụ ihuenyo ihuenyo biri ebi na polyester.
PCBFuture kasị mma na PCB ationgha na Assembly ọrụ. Anyị nwere nchedo ESD zuru ezu yana ọrụ nyocha ESD nke ndị ọrụ aka raara onwe ha nye nyere. N'ime afọ iri gara aga, PCBFuture na-aga n'ihu na-eto ma na-etolite n'ihi na anyị na-etinye aka mgbe niile ịnye ndị ahịa kachasị mma na ogo ngwaahịa.
Anyị PCB Assembly ike na-enye ndị ahịa anyị mma nke a "Otu Kwụsị PCB Ngwọta" ka ha PCB ationgha na Assembly mkpa. Ọkachamara anyị gụnyere Ugwu Mkpo (SMT), Thru-hole, Ngwakọta Ngwakọta (SMT & Thru-hole), Ntọala Otu ma ọ bụ nke Abụọ, Akụkụ Dị Mma, na ndị ọzọ.
Isi Board PCB Assembly China
PCBFuture-agba mbọ na-ezitekwara elu àgwà na aku na uba PCB n'ichepụta na Otu nkwụsị PCB nzukọ ọrụ niile ụwa ahịa. Si ngwa-n'aka prototyping, ala olu elu mix ka elu olu mmepụta, anyị na-mgbe niile na-n'uche na top àgwà, na oge nnyefe, asọmpi price na impeccable ọrụ bụ nanị ụzọ iji merie gị iguzosi ike n'ihe. Nke a na - enye gị ohere, onye ahịa a na - asọpụrụ, ilekwasị anya na isi azụmaahịa gị na - ejide n'aka na mkpa gị dị na aka na aka ọkachamara.
Isi PCB Assembly
PCBFuture bụ elekwasị anya na-enye ndị ahịa nwere ogo dị elu ngwa PCB na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ọrụ nnyefe oge na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere chọrọ maka ngwa PCB n'ichepụta, anyị bụ ndị gị ezi nhọrọ. Nwere ike nweta ihe ịchọrọ n'ihe gbasara ọsọ, arụmọrụ, ogo na ọnụahịa ebe a.
PCBFuture bụ ụlọ ọrụ akwadoro nke ọma, ụlọ ọrụ kọntaktị elektrọnik izizi na-enye PCB Assembly, PCB na PCB. Akụrụngwa anyị, sistemụ na usoro anyị kachasị maka mgbanwe na iwulite ngwaahịa dị mgbagwoju anya nwere oke chọrọ / nnukwu ngwakọta chọrọ. PCBFuture dị mma na-enye mma E Bipụtara Circuit Design na Turnkey prototype na mmepụta ngwọta na kọmputa obodo.
Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Mgbakọ Eletrọniki Smart njikwa
Mbipụta Circuit Board Assembly, makwaara dị ka PCBA, bụ usoro nke na-arịọnụ iche iche electronic akụrụngwa na PCB. A na-akpọ bọọdụ sekit tupu ikpokọta ihe eletrọnik PCB. Mgbe e resịrị ya ihe ndị dị na kọmputa, a na-akpọ bọọdụ ahụ akwụkwọ mgbakọ sekit e biri ebi (PCBA). Akara ma ọ bụ okporo ụzọ ndị na-eduzi ihe ndị e dere na PCBs a na-eji ọla kọpa mee ihe n'ime mkpụrụ na-enweghị ntụpọ iji mepụta nzukọ ahụ. Tinye ihe eletriki na PCB bụ ihe mmechi tupu i jiri ngwaọrụ eletrik arụ ọrụ nke ọma.